Wararka – Page 40 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Puntland ”Bariga Gobolka Mudug waxaan ku Dilnay Al-shabaab badan”
Iskuduwaha wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdinaasir Badal Qalaf oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Degaanka Jeexdin ay ku dileen Dagaalameyaal aad u badan oo ka tirsan Alshabaab. Iskuduwaha ayaa sheegay in howlgalkaas ay iska kaashadeen Ciidamada Puntland iyo kuwa Mareykan ah. Cabdinaasir Badal Qalaf ayaa sheegay in ay heleen Xog ku aadan Abaabul ay Al-shabaab ku soo qaadi lahaayeen Ciidamada ...
Sawirro: 13 Marxuum oo lagu dilay duqeyntii Gaakacyo oo la aasay
Waxaa maanta lagu aasay Magaalada Gaalkacyo 13 askari oo ka tirsanaa ciidankii maamulka Galmudug looga laayey duqeyn ay geysteen dayuurado dagaal oo ka dhacday duleedka magaaladaas. Waxaa ka qeyb galay aaskan masuuliyiin ka trsan maamulka Galmudug iyo qeybaha bulshada magaaladaas. Wasiirka amninga Galmudug, Cismaan Ciise Nuur (Taardhuleed) ayaa sheegay in weerarkan ay soo qaadeen ciidammada PS-ta Puntland oo ay taageerayaan ...
Ogow Faahfaahin ku saabsan qaabkii loo dilay Wariye C/caziis Xaaji
Alle ha u naxariistee maruum C/casiis Maxamed Cali (Xaaji) oo ka tirsanaa Idaacadda Shabelle ayaa shalay koox hubaysan ku dileen Muqdisho, mana jirto cid sheegatay. Hadaba qaabkii marxuumka loo dilay ayaa faah-faahin dheeri ah kasoo baxaysa. Nin degan xaafadda Towfiiq ee Degmada Yaaqshiid, ayaa sheegay in laba nin oo la socotay dhugdhugley, ay Wariyaha ku soo weerartay maqaaxi uu fadhiyay ...
Maraykanka oo ka warbixiyey duqeyn ka dhacday Jubadda Hoose
September 28, 2016	Leave a comment 43 Views
Maraykanka ayaa ka hadlay Duqayn dhinaca cir ah oo dhawaan ka dhacday deegaanka Kaamjaroom oo 90km dhinaca waqooyi uga beegan Magaalada Kismaayo. Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika, ayaa War Saxaafadeed ku sheegay in duqayntaasi ay ahayd mid is difaacid ah, ka dib markii ay Shabaabku soo weerareen goob ay ku sugnaayen Ciidamada Dowladda Somaliya iyo la taliye-yaal Mareykan ah, ...
Dagaal Khasaare geystay oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka Mudug
September 28, 2016	Leave a comment 46 Views
Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed ayaa ka dhacay deegaanka Jeexdin oo ku yaala duleedka dhanka bari ee magaalada Gaalkacyo. Salaadii subax kadib ayaa dagaalku qarxay, waxaana dagaalku uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Saddex ruux ayaa ku dhimatay dagaalka, halka 8 ruux uu dhaawac kasoo gaaray. Waxaa cabsi lasoo deristay dadka deegaanka, taas oo ku aadan ...
QM oo walaac ka muujisay dib u dhaca mar kale ku yimid doorashada Soomaaliya
September 28, 2016	Leave a comment 45 Views
Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay dib u dhaca mar kale ku yimid doorashada Soomaaliya, waxayna cadeeyeen inay muuqaneyso rajo ah inay qabsoonto doorasho ku dhacda si caddaalad ah oo la aqbali karo. Wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay dib u dhaca doorashada. “Dib u dhaca hadda yimid wuxuu ...
R/wasaare CCC ”goobta lagu soo xulayo xildhibaanada Hiiraan iyo Sh/dhexe Dowladda ayaa go’aaminasa”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashidi Cali Sharma’arke ayaa ka hor yimid go’aan ay dhawaan wada gaareen Qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ee matalaya Beelaha Dega Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe iyo Guddiga Doorashooyinka dadban. Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ayaa dhawaan sheegay in Odayaasha 135-ta Oday ugu jira Beelaha Dega Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe ay go’aansadeen in xubnaha aqalka ...
DEG DEG: Wariye ka tirsanaa Idaacadda Shabelle oo lagu dilay Muqdisho
September 27, 2016	Leave a comment 66 Views
Wariye ka tirsanaa Idaacadda Shabelle ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. Weriyaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Cali Xaaji ayaa waxaa lagu toogtay xaafada Jiiro garoob oo ka tirsan degmada Yaaqshiid. Goob joogayaal ayaa sheegaya in kooxo hubeysan oo watay Mooto bajaaj ay weriyaha toogteen, iyagoo ka dibna goobta ka baxsaday. Agaasimaha Idaacada ...
Madaxweynaha oo ka hadlay Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran Hindiya
September 27, 2016	Leave a comment 53 Views
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay sameyneyso dadaal kasta oo lagu xaqiijinayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalka India dib dalka loogu soo celiyo. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaalida ku xiran magaalada Mumbai ee gobolka Maharashtra uu arintooda kala hadley Ra’iisul Wasaaraha India, Narendra Modi, isla markaana labada dal uu haatan ...
Howlgal dad lagu soo qabtay oo laga sameeyey Suuqa Bakaaraha
Howlgal saaka waaberigii Ciidanka Amniga ee Qaranka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa la soo gaba gabeeyay. Afhayeenka wasaaradda Amniga Qarank Xukuumadda Soomaaliya, Cabdi kaamil Macalin Shukri ayaa sheegay in la soo gaba gabeeyay howl ballaarn oo saakay waabarigii ciidamad nabad sugidda Qaranka Soomaaliyeed ka sameeyeen suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa sheegay in ...